Blogger Ropa Mapota seSEO Manyepo Anopararira | Martech Zone
Chishanu, Mbudzi 30, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Yakatumirwa naChristina Warren:
Kwatiri, mhando yeSEO kurwisa kwakaratidzwa vhiki ino inongova nhanho shomanana kubva kune matani evabloggi / mawebhusaiti anoita mazuva ese: nemaune edza kumitambo yekutsvaga injini kuitira kuti vagone kuwana mamwe marasha kune yavo saiti, uye nekuwedzera, pamwe gadzira madhora mashoma ekuwedzera. Kunze kwekunge iwe uchimhanyisa yakatwasuka-up scam link-purazi kana chaizvo, rombo rakanaka - chinzvimbo chepamusoro cheinjini yekutsvagisa pasirese hachizowana mabhenefiti anogara kana zvirimo zvisipo.
Imwe Hasha Hasha
Iyo yakazara posvo yakawana mhinduro yakasimba kubva kuna Michael pa Greywolf's SEO Blog, uyo chaizvo anoti Christina ibenzi risingazive. Rudzi irworwo rwemutauro rwakasimba zvishoma, handisi kuzorwisa Christina, asi ndichataura kuti tsamba yake yaive yekurwiswa kwevanhu vakaita seni - vanoshanda mablog edu nechishuwo nehunyanzvi savvy kukwezva nekuchengetedza zvakanyanya vaverengi.
Kuziva tekinoroji yekutsvaga uye kugadzirisa saiti yako haina kusiyana nekutsvaga traffic uye kutsvaga nzvimbo yakanakisa yechitoro chako chekona. Iwe une chigadzirwa chakakura uye chitoro chikuru, hazvina kungwara here kuisa chitoro munzvimbo yakanaka? Ndizvo uchitamba mutambo wacho kunze kwekunge waisa chitoro chako pakati perenje pasina anochiwana?
Christina zvakare anoita seasingazive kugona kweGoogle kunyatsoongorora uye nekuisa zvinongedzo. Chokwadi chinotaurirwa, iwe unogona kuita yese yekutamba yaungade, asi kana pasina munhu ari kuratidza yako saiti, iwe haugone kuve pakamira kwenguva refu. Kuzivikanwa chinhu chakakosha pawebhu, uye mabloggi anobatsira kufambisa mukurumbira weumwe neumwe. Ini ndinoita mazana ekutsvaga neGoogle zuva nezuva, uye kashoma kuwana peji rakakwidzwa kumusoro iro risina ruzivo rwandiri kutsvaga.
Iri Blogging Mukana? Ndizvozvo!
Kana usiri kutora mukana iwo mikana yakawanikwa neinjini dzekutsvaga, iwe unongova benzi. handisi uchitamba mutambo wacho iyo system nekuisa pfungwa pane yangu peji chimiro, zvemukati, rakakosha kiyi sarudzo, nezvimwe ndiri kuisa tsvuku kapeti kunze kweGoogle, Microsoft, uye Yahoo! kundiwana zviri nyore uye nekuronga zvemukati zvakanaka.
Google yakanyora iyo yekubheka iyo saiti dzese dzakanaka dzinofanira kutevera. Kana iwe usingakwanise kuteedzera iyo yekubheka, usanyunyute kwandiri kuti kudya kwako kwemanheru kunonaka kunge mbichana uchienzaniswa neyangu Enda pakubika, tevera rairo… uye kumbira rubatsiro paunenge uchirida!
Tags: zvakanakisisa zviitoemail kukurudziraemail listtsamba yeemail kuwedzerafliptopnhoroondo yekushambadziraPima CPSliderhuchenjeri hwemagariropasocial media zvakanaka maitirozvemagariro matipi
Doug: Mashoko ayo seizvi ndinodzoka kune yako saiti. Njere uye yakajeka. Iwe wakanyatsonaka mukufananidza ikoko nechitoro murenje.
Kushambadzira kwakakosha kwazvo apo kambani hombe inopararira zvakawandisa neruzivo uye zvakakosha kuti upfuure kumutengi wako. Hazvina kana mutengo kunyangwe nzira senge spam ndinozvidza zvakanyanya…
Nemablogiki vanhu vadiki vakawana nzira nyowani yekuti chokwadi chavo chiudzwe uye vanhu vanosunungura simba ravo vanogumbuka. Ndinofunga zvinongoratidzira chete kuti vanofunga kuti zvimwe chokwadi kunze kwavo kwakashata zvachose…
Vachave nekumuka kwakaoma…
Kutenda nemashoko ako emutsa, Bengt! Iyo Internet yave iri chaiyo yakaenzana.
Zvita 1, 2007 na2: 38 PM
Zvinonzwika kwandiri sekunge zvakataurwa naChristina nezve "mutambo wemitambo" zvinoreva zvakanyanya kune avo vanoshandisa matekiniki eheti nhema. Basic optimization ye blog / saiti chinhu icho vatengesi vese vanofanirwa kuziva kana ivo vanoguma vasiya "mutambo" nekutadza ... ndinotenda iye zvirinani anozvigamuchira izvo uye ndizvo chaizvo nezve kuve nezviri mukati kana zvimwewo.
Kusvika pakukwanisa kweGoogle kunyatso rongedza mapeji… iwo akakwana zvakakwana, asi ini ndakaita tsvakiridzo iyo yekumusoro rondedzero yanga isina zvakawanda zvekuita nekutsvaga kunze kwezwi rakakosha (s) rinoratidza mune zvinyorwa nguva nenguva.
Kunyangwe ini ndichinyatsonzwisisa chero chinhu chauri kutaura Doug, ini ndanga ndichida kuve wakanaka kuna Christina - handifunge kuti ari chizere benzi.
Zvita 1, 2007 na3: 12 PM
Zvichida ndiro dambudziko, William. Christina haasi kusiyanisa yega yega, ari kungo bvarura iro rese blogosphere pamwechete uye achiti isu tiri iro dambudziko, kwete mhinduro.
Hechino chimwe chirevo:
Pane zvakawanda zvekutaura mukati meiyo tech nharaunda, kunyanya iyo blogosphere nezve kushandisa SEO uye kuti ZVAKANAKA sei kune mabloggi uye haina kukanganisa kukanganisa vaverengi / vanotsvaga / vashandisi venguva dzose. Uku kunyepa.
SEO haina kunaka kune vaverengi uye vanotsvaga? Chaizvoizvo? Zvese manyepo uye mablog ari kukanganisa mhedzisiro yekutsvaga? Ini ndinowana rwakawanda rubatsiro rwangu kubva kumablog, kwete mabhurocha masayiti… rubatsiro rwekutsvaga vatengesi, budiriro, SEO, kushambadzira, tekinoroji… kashoma kuti ini ndiwane zvirinani zvinhu kunze kweblogosphere.
Ini ndinotenda mablog anowanzo kuve akavhurika, akatendeseka uye akaenzana pane ewebhu webhusaiti. Ndosaka vanhu vachivateerera zvakanyanya - uyezve - Google inovaisa pamusoro. Makambani haafarire izvi… kutaura zvazviri, vanozvizvidza nekuti zvinogona kuvamanikidza kuvhura votanga kuzvinyora.
Midhiya yaigara ichifunga chinhu chimwe chete, ichigara ichigogodza iyo blogosphere uye ichipomera yavo nhamo dzepamhepo pamabloggi. (Sekungopomera kwavakaita classifieds kufa pa eBay neCraigslist). Zvirinani Mass Media vakangwara, zvakadaro, uye ivo vava kubloga!
Izvo zvese nezvekupa uye kudiwa. Ini ndinofunga Christina ane zvese zvisirizvo nekuti vanhu vari kuda izvi zvemukati zvemukati. Blogger haisi iyo dambudziko. Kusaziva.
PS: Ini handifunge kuti Christina i'benzi ', futi. Ini ndinongofunga kuti haana kunzwisisa kwakazara kwehunhu hwekutsvaga, maitiro epamhepo, uye nemabatiro aanofanira kuzviita. Ndinoziva vanhu vazhinji vakaita saChristina!
Zvita 3, 2007 na9: 02 PM
Sezvo nezvose, pane mutsetse wakanaka pakati pezvakanaka nezvisina kunaka (zvakaipa). Ini ndinofungidzira zviri kumunhu wese pachezvake kuti aite musiyano uyu, asi zvine chekuita neblogosphere zvakaoma mazuva ano kuwana chimwe chinhu chichiitika pasina kumbobvira waita mamwe marongero epamberi eiyo. Kana iwe ukaverenga blog yaMat pane izvi unoona zvirevo sekuti "haufanire kuita izvi kana izvo asi kana uri izvo zvino" - lol 🙂
Zvita 4, 2007 na2: 10 PM
Izvi zvirokwazvo zvakada kufanana ne "mutambo" mukuti isu tese tinofanira kuronga mutambo "kubata-kumusoro" nemaitiro azvino uno ... asi izvi ndizvo zvazviri ani Bhizinesi.